Calamares 3.2.33, yenguva dzose vhezheni inouya nekumwe kugadzirisana kwekuenderana | Linux Vakapindwa muropa
Calamares 3.2.33, yenguva dzose vhezheni inouya nekumwe kugadzirisana kwekuenderana
Kuvhurwa kweSquid 3.2.33 kuchangobva kupihwa (furemu yekuvaka vanoisa iyo isingatsamire pane yakatarwa kugoverwa kweLinux), iyi vhezheni nyowani inorongwa seyakajairika vhezheni uye yenhau dzayo dzakatanhamara are the kugadziridzwa kwekuenderana, plymouth tsigiro ine encryption uye nezvimwe.
Kune avo vasingazive nezve squid, vanofanirwa kuziva izvo inopa maficha senge echinyorwa uye otomatiki modes ye disk zvikamu, inoshanduka kuoneka inochinjika system, modular architecture, hombe sarudzo yemamodule akagadzirwa (kubva kubhootloader manejimendi kune mushandisi manejimendi).
Somuenzaniso, kune ma module ekushandisa NetworkManager, UPower, systemd-boot, GRUB, sgdisk, squashfs-maturusi uye rsync. Iyo yekumisikidza inogona kurongedzwa nekutsiva iyo partition: iyo data inoteedzerwa kuchikamu chitsva, chinoitwa panzvimbo pechikamu chakamboshandiswa, icho chiri nyore kuyedza maficha matsva, zvichisiya iyo sarudzo yekudzosera kumashure kune yapfuura vhezheni.
Calamares inosanganisira yekumusoro chikamu basa, nerutsigiro rwezviri zviviri zvemanyore uye otomatiki partition mashandiro. Iyo ndiyo yekutanga yekumisikidza ine otomatiki "Tsiva Chikamu" sarudzo, izvo zvinoita kuti zvive nyore kushandisa zvekare kupatsanurana kakawanda pamusoro pekuedzwa kwekugovera.
Vagadziri yekugovera ivo vane akati wandei gumi nemaviri module kunze kwebhokisi nekumisikidzwa kwezvakasiyana maficha izvo zviri kudiwa muma installers. Iyo kodhi yakanyorwa muC ++, iyo graphical interface inoenderana neQt 5 raibhurari (QML inoshandiswa), iyo C ++ uye mitauro yePython inogona kushandiswa kugadzira ma module.
Calamares yatove kushandiswa kugadzirisa kuiswa kweManjaro, Sabayon, Chakra, NetRunner, KaOS, OpenMandriva uye KDE neon kugoverwa. Iyo projekiti iri kuvandudzwa nemipiro kubva kuKDE, Fedora, Kubuntu, uye Maui nharaunda.
Uye ndezvekuti chaizvo kuti ugadzire yako yekumisikidza yakavakirwa paCalamares, iwe unongoda kusarudza yakafanirwa mamodule kana kunyora yako wega, tsanangura iyo yekumisikidza pfungwa yekuparadzira kit uye gadzirisa maitiro.
Kuita kuti zvive nyore uye nekukurumidza kusimudzira, Calamares ma module uye zvinhu zvinogona kugadzirwa muPython (Boost.Python inoshandiswa pakusanganisa kweC ++).
Zvinyorwa zvitsva zveSquid 3.2.33
Iyi vhezheni itsva yeCalamares 3.2.33 sezvambotaurwa pakutanga inorongedzwa seyakajairwa vhezheni nazvo, pane mashoma akakosha shanduko anoitwa mushanduro iyi nyowani.
Nezve shanduko dzataurwa, tinogona kuona kuti dambudziko rakagadziriswa nekushaikwa kwechigadzirwa chechiLatin mushure mekuisa iyo sisitimu ine non-latin dhizaini sarudzo, pamwe nekugona kwekushandisa asiri-ASCII marongero akawedzerwa nekutsanangura password uye zita rekushandisa mu keyboard uye keyboard mamodhi izvo izvo zvino zvinogovana backend kodhi uye zvirinani kubata zvigadzirwa.
Zvakare, iyo dudziro yekuvandudza mamodule ane chekuita nekhibhodi masetera uye nguva yenguva.
Inopa iyo ckuchengetedzwa kwemireza yezvikamu zveGPT mune partition edit dialog inonzi in manual partition mode, pamwe nekuchenesa kwakasiyana siyana uye magwaro ekuwedzera mune module yekuparadzanisa.
Zvinodikanwa zvevaunganidzi zvakawedzerwa- Iyo Gungano ikozvino inoda rutsigiro rweiyo C ++ 17 standard (izvi ndezvekuenderana zvirinani uye mashoma mapako kana uchinyora ne KDE)
Vanofanira kudaroyakawedzera mikana yekupa boka kana ichigadzira mushandisi- Chinongedzo kumapoka ehurongwa chaonekwa uye sarudzo yakawedzerwa yekutarisa boka.
Iyo initcpiocfg module inofanirwa kutsigira plymouth nekunyorera ikozvino.
Iyo mushandisi module ikozvino ine yakadzama nzira yekutsanangudza mapoka evashandisi, ayo anogona kuve masystem mapoka panzvimbo pevashandisi maGID. Sarudzo nyowani muboka rega rega ingangoda kuti boka rivepo pachirongwa, zvichitendera zvirinani kutarisisa pamwe ne squashfs.
Chekupedzisira, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve iyi nyowani vhezheni, unogona kutarisa izvo zvinyorwa mu chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Calamares 3.2.33, yenguva dzose vhezheni inouya nekumwe kugadzirisana kwekuenderana
Ini ndinovenga squid, yega yega distro inoshandisa squid inotoziva 100%, kuti ini handigone kuiisa, nekuti haina kuziva kurwisa 0 uye nevamwe vese vanoisa.
Termux, application uye terminal emulator yeApple neLinux